कोरोना सधैं रहिरहला ?
२०७७ चैत, १३
कोरोनाको त्रास कम हुँदै गएको अवस्थामा १ हप्तामा नै नेपालमा कोरोनाको सन्त्रास फेरि बढ्न थालेको छ । विश्वमा नै कोरोनाले नयाँनयाँ भेरिएन्ट बन्दै दुःख दिइरहेको छ । यूरोपमा दोस्रो लहरपछि अहिले तेस्रो लहर शुरू भएको छ । भारतमा दोस्रो लहर आएको छ, जसबाट त्यहाँ संक्रमित हुने र मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न थालेको छ । १/२ महीनामा यसको चेन टुट्छ भनेर लगाइएको बन्दाबन्दी महीनौंसम्म जारी रहँदा पनि कोरोना संक्रमण रोक्न सकिएन । यस्तोमा कोरोना मानिसहरूबीच सधैं रहिरहन्छ कि भन्ने त्रास बढेर गएको छ ।
कुनै बिन्दुमा यो महामारी समाप्त भएर जानेछ र हामी पुनः सामान्य अवस्थामा फर्किनेछौं भन्ने आशा बिस्तारै हराउन थालेको छ । सार्स–कोभ–२ (कोभिड–१९) जति छलकारी र निरन्तर रूप बदलिरहन सक्षम छ, त्यसले यो फ्लुजस्तै तर त्यसभन्दा निकै खतरनाक स्थायी शत्रु हुन सक्ने सम्भावना देखाउँछ ।
अधिकांश महामारी जनसंख्याले एकपटक हर्ड इम्युनिटी प्राप्त गरिसकेपछि हराएर जान्छन् । हर्ड इम्युनिटी संक्रमणबाट निको भएका मानिसको प्राकृतिक इम्युनिटी र बाँकी जनसंख्याका हकमा खोपबाट प्राप्त हुन्छ । तर, कोरोना भाइरसले बारम्बार रूप फेरिरहेकाले हामीले कहिल्यै पनि हर्ड इम्युनिटी प्राप्त गर्न नसक्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता थप्दै छ । खोप लगाउने मामलामा अन्य सबै मुलुकलाई उछिनिरहेको अमेरिकासमेत हर्ड इम्युनिटीमा पुग्न सकेको छैन । भाइरसका नयाँ–नयाँ भेरियन्टले लगभग नयाँ भाइरसले जस्तै व्यवहार देखाउँदा यस्तो समस्या आएको बताइन्छ । दक्षिण अफ्रिकामा गरिएको परीक्षणमा पहिले संक्रमण भइसकेका मानिसमा भएको रोगप्रतिरोध क्षमताले उत्परिवर्तित भाइरसविरूद्ध काम नगरेको र पुनः संक्रमित भएको पाइएको समाचार आएको छ । यसले खोपबाट मात्रै दिगो हर्ड इम्युनिटी प्राप्त हुन सक्ने देखाएको छ । तर, समयक्रममा ती पनि नयाँ भेरियन्टविरूद्ध निष्प्रभावी नहोलान् भन्न सकिँदैन ।
भाइरसले आफ्नो प्रतिलिपि उतार्दा अझै बढी शक्तिशाली रूपमा उत्परिवर्तित हुन सक्छन् । बेलायती, दक्षिण अफ्रिकी र ब्राजिली भेरियन्ट निकै खरतनाक भएको बताइन्छ । खोप प्राप्त गर्न असफल गरीब मुलुकहरूमा समेत यो भाइरसले तीव्र रूपमा उत्परिवर्तन प्राप्त गरिरहेको हुनुपर्छ ।
नेपालमा नयाँ खालको भाइरस हो कि होइन भन्ने थाहा छैन । भाइरसको भेरिएन्ट पत्ता लगाउने मेशिन ल्याइए पनि त्यसलाई चलाउन सक्ने दक्ष जनशक्ति नहुँदा त्यो प्रयोगमा आउन सकेको छैन । यस्तोमा नेपालमात्र होइन, विश्वका विपन्न मुलुकहरूमा भाइरसले नयाँ नयाँ रूप लिएर दुःख दिइरहन सक्छ । केही वैज्ञानिकहरूले मान्छेसँग यो भाइरस सधैं रहिरहने भएकाले त्यसैअनुसार जीवनपद्धति बनाउनुपर्ने कुरासमेत बताइरहेका छन् । के कोरोना भाइरसले विश्वभर मानिसको जीवनशैली सदाका लागि बदल्ला त ?
बालाजु हाइट, काठमाडौं ।